Universal Tv Live - Dowladda Somaliya oo isbahaysiga Sacuudiga ku eedeysay Somalid...
Dowladda Somaliya oo isbahaysiga Sacuudiga ku eedeysay Somalida lagu laayay dalka YemenDowladda Somaliya, ayaa si kulul ugu eedeysay isbahaysiga uu hormuudka ka yahay Sacuudiga iyo Dowladda Yemen in ay ka masuul yihiin 42 qof oo Soomaali ah, oo habeenkii Khamiista lagu dilay dalkaasi Yemen.
C/salaan Hadliye Cumar, Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya, ayaa galabta sheegay in isbahaysiga iyo Dowladda Madaxweyne Abdrabbuh Mansur Hadi, ay qaadi doonaan masuuliyadda dadkaasi la laayay.
"Waxaa ka dhacay meeshaas fadeexad iyo dhibaato wayn oo dad Soomaaliyeed oo masaakiina gaartay. Waxaa masuul ka ah isbahaysiga ka dagaalamaya Yemen iyo Dowladda Abdrabbuh Mansur Hadi." Ayuu yiri Wasiirka.
"Waa inay jawaabo ka soo bixiyaan dhibaatadaasi. In inta dhimatay loo aaso sidii Islaamnimada ee wanaagsaneyd, inta kalana la geeyo goobaha caafimaadka iyo in dadkooda lala soo hadlo. Dhibaatada meeshaa ka dhacday inay ciddi masuul ka noqoto weeye." Ayuu yiri Wasiir Hadliye oo la hadlay Warbaahinta Dowladda.
Diyaarad Helicopter ahayd, ayaa la sheegay in gantaal ay ku dhufatay dooni ay saarnaayeen in ka badan 100 qof oo Soomaali ah, xilli doonida la sheegay in ay ku sii jeeday dalka Sudan.
NextMadaxweynaha Kenya oo booqasho qarsoo...PreviousMadaxweynaha Somaliya oo Madaxtooyada...Comments